Ooredoo ကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် မိတ်ဆွေသည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ဖုန်းခေါ်ခြင်း နှင့် စာတိုပို့ခြင်း(SMS) တို့ကို အချိန်မရွေး ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။
နိုင်ငံတကာသို့ တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း (IDD)
Ooredoo ကွန်ရက်၏ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ စွမ်းရည်မြင့်ချိတ်ဆက်ထားမှုများကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးနီးပါးသို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပြီး ဒီတူညီတဲ့ ချိတ်ဆက်မှုတွေကပဲ မိတ်ဆွေ၏ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိတဲ့ မိသားစု၊သူငယ်ချင်းများ နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီက ဖုန်းခေါ်မှုတွေကို လက်ခံနိုင်ပါပြီ။
00 သို့မဟုတ် + ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ထိုနိုင်ငံ၏ ကုဒ်နံပါတ် ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျင် ရှေ့ဆုံးမှ သုံည မပါဘဲ မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုလိုသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဥပမာ - 00-95-997000234 ( မြန်မာပြည်တွင်း အူရီဒူး မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ခေါ်လျင်)
00 သို့မဟုတ် + ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ထိုနိုင်ငံ၏ ကုဒ်နံပါတ် ကို ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျင် ရှေ့ဆုံးမှ သုံည မပါဘဲ နယ်မြေဒေသ ၏ ကုဒ်နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ နောက်ဆုံးတွင်မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုလိုသည့် လိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဥပမာ- 00-95-1-654909 (မြန်မာပြည်တွင်း လိုင်းဖုန်းများသို့ခေါ်လျင်)
ဃခု Ooredoo ဖြင့် ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ မိုဘိုင်းကွန်ရက်အများစုသို့ စာတိုများကို ပေးပို့/လက်ခံ နိုင်ပါပြီ။
နိုင်ငံတကာ မိုဘိုင်းဖုန်းများသို့ SMS (စာတို မက်ဆေ့ခ်ျ)များပေးပို့ရန်
မိတ်ဆွေ ပို့လိုသည့်နံပါတ်ရှေ့တွင် 00 (သို့မဟုတ်) + ရိုက်ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ရှေ့ဆုံးမှ သုံည မပါဘဲ မိတ်ဆွေခေါ်ဆိုလိုသည့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
ဥပမာ - 00-95-997000234
မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုခြင်း* 1
မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံသို့ SMS ပို့ခြင်း 1
N/A = လက်ရှိမှာ ဒီတိုင်းပြည်နဲ့ သဘောတူညီမှု မရှိသေးပါ။ သို့သော် အမြဲ သဘောတူညီမှုသစ်တွေတင်ပေးနေတာမို့ မကြာမီမှာ ပြန်လည်စစ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းများအားလုံးသည် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ကျပ်ပြည့်တွက်ချက်မှုများပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။
မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများသို့ ခေါ်ဆိုခြင်း*
မြန်မာပြည်မှ ရွေးချယ်ထားသောနိုင်ငံများသို့ စာတိုပေးပို့ခြင်း
အာဘ်ခါဇီးယား 750 125
အာဖဂန်န စ္စတန် 750 125
အယ်လ်ဘေးနီးဟား 750 125
အယ်လ်ဂျီးရီးယား 750 125
အမေရိက ဆမိုအာ 750 125
အန်ဒိုရာ 750 125
အန်ဂိုလား 750 125
အန်ဂွီလာ 750 125
အန်တီကွာနှင့် ဘာဘူဒါ 750 125
အာဂျင်တီးနား 750 125
အာမေးနီးယား 750 125
အရူးဘာ 750 125
သြစတေးလျ 400 125
သြစတြီးယား 600 125
အဇာဘိုင်ဂျန် 750 125
ဘဟားမားစ် 750 125
ဘာရိန်း 750 125
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် 200 125
ဘာဘာဒို့စ် 750 125
ဘယ်လာရုစ် 750 125
ဘယ်လ်ဂျီယံ 600 125
ဘီလီဇီ 750 125
ဘီနင် 750 125
ဘာမြုဒါ 750 125
ဘူတန် 750 125
ဘိုလီးဗီးယား 750 125
ဘော့စ်နီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုးဗီးနား 750 125
ဘော့ဆွာနာ 750 125
ဘရာဇီး 750 125
ဗြိတိန်ဗာဂျင်းကျွန်း 750 125
ဘရူနိုင်းဒါရူဆလင် 400 125
ဘူလ်ဂေးရီးယား 750 125
ဘာကီနာဖက်ဆို 750 125
ဘူရွန်ဒီ 750 125
ကမ္ဘောဒီးယား 200 125
ကင်မရွန်း 200 125
ကနေဒါ 100 125
ကိတ်ဗာဒီ 750 125
ကေးမန်းကျွန်းစု 750 125
ဗဟို အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ 750 125
ချက် 750 125
ချီလီ 750 125
တရုတ် 200 125
ကိုလံဘီယာ 750 125
ကိုမိုရိုစ်နှင့် မာရိုတီ 750 125
ကွတ်ကျွန်းစု 1500 125
ကော့စတာရီကာ 750 125
အိုင်ဗရီကို့ စ် 750 125
ခရိုအေးရှား 600 125
ကျူးဘား 1500 125
ဆိုက်ပရပ်စ် 750 125
ချက်သမ္မတနိုင်ငံ 750 125
ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံ 750 125
ဒိန်းမတ် 600 125
ဂျီဘူတီ 750 125
ဒိုမီနီကာ 750 125
ဒိုမီနကန်သမ္မတနိုင်ငံ 750 125
အီကွေဒေါ 750 125
အီဂျစ် 750 125
အယ်လ်ဆာဗေဒိုး 750 125
အီကွေတိုးနီးယီးရဲလ်ဂီနီ 750 125
အက်စ်တိုးနီးယား 1500 125
အီသီယိုးပီးယား 750 125
ဖော်ကလန်ကျွန်းစုများ 1500 125
ဖာရိုးကျွန်းစုများ 750 125
ဖီဂျီ 750 125
ဖင်လန် 750 125
ပြင်သစ် 600 125
ပြင်သစ်ဂျီယားနား 750 125
ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား 750 125
ဂါဘွန် 750 125
ဂယ်ဘီးယာ 750 125
ဂျော်ဂျီယာ 750 125
ဂျာမနီ 600 125
ဂါနာ 750 125
ဂီဘရာတာ 750 125
ဂရိ 600 125
ဂရင်းလန်း 750 125
ဂရီနာဒါ 750 125
ဂွမ်း 750 125
ကွတီမာလာ 750 125
ဂီနီ 750 125
ဂီနီဘစ်ဆော 750 125
ဂူယာနာ 750 125
ဟေတီ 750 125
ဟွန်ဒူးရပ်စ် 750 125
ဟောင်ကောင် 400 125
ဟန်ဂေရီ 600 125
အိုင်စလန် 750 125
အိန္ဒိယ 200 125
အင်ဒိုနီးရှား 200 125
အီရန် 750 125
အီရတ် 750 125
အိုင်ယာလန် 600 125
အစ္စရေး N.A. N.A.
အီတလီ 600 125
ဂျမေကာ 750 125
ဂျပန် 400 125
ဂျော်ဒန် 750 125
ကာဇက်စတန် 750 125
ကင်ညာ 750 125
ကေရီဘာတီ 1500 125
မြောက်ကိုရီးယား 750 125
တောင်ကိုရီးယား 400 125
ကူဝိတ် 750 125
ကာဂျစ်စတန် 750 125
လာအို 200 125
လက်ဗီးယား 1500 125
လဘနွန် 750 125
လီဆိုသို 750 125
လိုက်ဘေးရီးယား 3000 125
လစ်ဗျား 750 125
လီချင်စတိန် 750 125
လစ်သူရေးနီးယား 750 125
လူဇင်ဘတ် 750 125
မကာအို 400 125
မက်ဆီဒိုးနီးယား 750 125
မဒဂါစကား 1500 125
မာလာဝီ 750 125
မလေးရှား 200 125
မော်လ်ဒိုက် 1500 125
မာလီ 750 125
မော်လ်တာ 750 125
မာတီနစ်နှင့်ဂွါဒီလုပ် 750 125
မော်ရီတေးနီးယား 750 125
မောရစ်ရှပ်စ် 750 125
မက္ကဆီကို 750 125
မိုက်ခရိုနီးရှး 750 125
မော်လ်ဒိုဗာ 750 125
မိုနာကို 750 125
မွန်ဂိုလီးယား 750 125
မွန်တီနီဂရိုး 750 125
မွန့်စာရက် 750 125
မော်ရိုကို 750 125
မိုဇမ်ဗစ် 750 125
နမီးဘီးယား 750 125
နီပေါ 400 125
နယ်သာလန် 600 125
နယ်သာလန်အန်တီလက် 750 125
နယူးကယ်လီဒိုနီးယား 750 125
နယူးဇီလန် 400 125
နီကာရာကွာ 750 125
နိုင်ဂျာ 750 125
နိုင်ဂျီးရီးယား 750 125
နော်ဝေ 600 125
အိုမန် 750 125
ပါကစ္စတန် 400 125
ပလော် 1500 125
ပနားမား 750 125
ပါပူးဝါးနယူးဂီနီ 1500 125
ပါရာဂွေး 750 125
ပီရူး 750 125
ဖိလစ်ပိုင် 200 125
ပိုလန် 600 125
ပေါ်တူဂီ 600 125
ပေါ်တိုရီကို 750 125
ကာတာ 750 125
Reunion 750 125
ရိုမေးနီးယား 600 125
ရုရှား 600 125
ရဝမ်ဒါ 750 125
စိန့် ကစ်နှင့်နီဗစ် 750 125
စိန့် လူစီယာ 750 125
စိန့် ဗင်းဆင့် နှင့် ဂရီနာဒင်း 750 125
ဆာမိုဝါ 750 125
ဆော်တိုမီနှင့် ပရင်စီပီ 1500 125
ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား 750 125
ဆီနီဂေါ 750 125
ဆားဘီးယား 750 125
ဆေးရှဲလ်စ် 750 125
ဆီယာရာလီယွန် 750 125
စင်ကာပူ 200 125
ဆလိုဗက်ကီးယား 750 125
ဆလိုဗေးနီးယား 750 125
ဆော်လလွန်ကျွန်းစု 3000 125
ဆိုမားလီးယား 750 125
တောင်အာဖရိက 750 125
တောင်ဆူဒန် 750 125
စပိန် 600 125
သီရိလကာင်္ 400 125
စိန့်ဟယ်လီနာ၊ အက်ဆန်ရှင်းနှင့် ထရစ်စတန် 1500 125
စိန့်ပီယဲနှင့်မီကဲလွန် 750 125
ဆူဒန် 750 125
ဆူရီနမ် 750 125
ဆွာဇီလန် 750 125
ဆွီဒင် 600 125
ဆွစ်ဇာလန် 600 125
ဆီးရီးယား 750 125
ထိုင်ဝမ် 400 125
တာဂျစ်ကစ္စတန် 750 125
တန်ဇန်းနီးယား 750 125
ထိုင်း 200 125
တီမောလက်စ်တေ 1500 125
တိုဂို 3000 125
တွန်ဂါ 3000 125
ထရီနီဒတ်နှင့် တိုဘားဂိုး 750 125
တူနီးရှား 750 125
တူရကီ 750 125
တာခ်မင်န 750 125
တက်နှင့် ကိုင်ကော့ ကျွန်းစုများ 750 125
ယူဂန်ဒါ 750 125
ဗြိတိန် 600 125
ယူကရိန် 600 125
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထော်စု 750 125
အမေရီကန်ပြည်ထောင်စု 100 125
ဥရှဂွေး 750 125
ဥဇဘက်ကစ္စတန် 750 125
ဗာတီကန်မြို့တော် 600 125
ဗာနေတူ 750 125
ဗင်နီဇွဲလား 750 125
ဗီယက်နမ် 200 125
ယီမင် 750 125
ဇမ်ဘီယာ 750 125
ဇင်ဘာဘွေ 750 125
ဖုန်းခေါ်ဆိုခကောက်ယူရာတွင် တစ်မိနစ် ကို တစ်ယူနစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ- တစ်မိနစ် ၇၅၀ ကျပ် ကျသင့်သည့်နိုင်ငံသို့ ၄၅ စက္ကန့် ဖုန်းပြောပါက တစ်ယူနစ်စာ ၇၅၀ ကျပ် ကောက်ယူမည်ဖြစ်ပြီး ၇၅ စက္ကန့်ကြာဖုန်းပြောပါက နှစ်ယူနစ်စာ ၁၅၀၀ ကျပ် ကောက်ယူသွားပါမည်။
SMS( စာတို) ပို့ခကောက်ယူရာတွင် ဇော်ဂျီဖောင့် မြန်မာစာ အလုံး ၇၀ ကို တစ်ယူနစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ အင်္ဂံလိပ်စာဖြင့်ပို့ပါက အလုံးရေ ၁၆၀ ကို တစ်ယူနစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ ဥပမာ- တစ်ယူနစ် ၁၂၅ ကျပ် ကျသင့်သည့်နိုင်ငံသို့ ဇော်ဂျီဖောင့် မြန်မာစာ အလုံး ၉၀ ပါရှိသော SMS( စာတို) ပို့ပါက နှစ်ယူနစ်စာ ၂၅၀ ကျပ် ကောက်ယူသွားပါမည်။ SMS( စာတို) တွင်ရေးသားထားသည့် ဇော်ဂျီဖောင့် မြန်မာစာ ဖတ်၍ ရ မရ သည် ထို SMS( စာတို) လက်ခံရရှိသူ၏ ဖုန်း ဟန်းဆက်setting အပေါ်သာ မူတည်ပြီး အူရီဒူးမှ ထိန်းချုပ်စီမံ၍မရနိုင်ပါ။